लसुन खेती कसरी गर्ने ? कस्तो हावापानी र मल प्रयोग गर्ने ? – News Of Global
News Of Global बुधबार, आषाढ २४, २०७७
धेरै मानिसहरू लसुनको गन्धको कारण र यसको कडा स्वाद मनपराउँदैनन्। तर यो कुरा गलत हो । लसुन गुणहरू को एक भण्डार हो । यसमा एन्टी– अक्साइड गुणहरू छन् जुन हाम्रो पेटको लागि सबैभन्दा आवश्यक र लाभकारी हुन्छ। यदि हामी बिहानको खाली पेट यसको उपयोग गर्छौं भने, हामी कहिल्यै पेटसँगको कुनै समस्यामा पर्दैनौ । जस्तै, बवासीर, कब्ज, ईश्वर, रक्तचाप, भूख वृद्धि गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ । लसुनले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक एन्टिबायोटिक जस्तै काम गर्दछ ।
जि.आर.एस. एग्रीकल्चर फार्म इन्द्रायणी साँखुमा गरिएको लसुन खेतीका बारेमा केही कुरा गरौं । लसुन कसरी लगाउने, यसको भण्डारण कसरी गर्ने र यसका फाइदाहरु के के छन् ? लसुन खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्टः
लसुन उच्च पहाडमा साउन(भदौंमा रोप्न सकिन्छ ।
लसुन वानस्पतिक प्रसारण गरिने मसला वाली हो । लसुनको केस्रा (ऋयिखभ) वाट नै प्रसारण गरिन्छ । अतः रोगकम लाग्ने स्वस्थ्य ठूला, आकर्षक गानाको बोटमै छनौट गरि बीउको लागी भण्डारण गर्नु पर्दछ । तर ख्याल गर्नु पर्ने कहिले पनि उच्च पहाडबाट ल्याएको लसुन तराईमा लगाउनु हुँदैन । भोटे टाइपका लसुनको पनि तराईमा गानो लाग्दैन ।
लसुनलाई प्राङगारिक मल प्रशस्त चाहिने भएकोले ३० टन राम्ररी पाकेको गोठे वा कम्पोष्ट मल प्रति हेक्टर जमिन तयार गर्नु अधि प्रयोग गरी खनजोत गर्नु पर्दछ । रसायनीक मलको हकमा प्रति हेक्टर १२०स् ८०स्८० के.जी.नाइट्रोजन, फसफोरस र पोटास सिफारिस गरिएको छ ।
लसुन खेतीको लागी ५.६ के.जी. युरिया, ८.७. के.जी. डी.ए.पी. र ६.७५ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति रोपनी जग्गा तयारीको अन्तिम वेला प्रयोग गरिन्छ भने ४ के.जी. युरिया २र२ के.जी.का दरले रोपेको ३० दिन र ६० दिन पछि प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
लसुन रोप्न बीउ (केस्रा) ५००–६०० के.जी. प्रति हेक्टर (२५ देखि ३० के.जी. प्रति रोपनी) आवश्यक पर्छ।
लसुनको पहिलो गोडाई लगाएको २५(३० दिन पछि र दोश्रो गोडाई ५०(६० दिन पछि गर्नु पर्छ ।
यसरी उत्पादन भएको लसुनका विशेषताहरु के के छन् त ? आउनुस् ती बारे पनि कुरा गरौं ।
लसुन(न्बचष्अि)को प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
लसुनमा कुन–कुन पौष्टिक तत्वहरु पाईन्छ ?
लसुनको औषधिय गुण के–के हुन ?
लसुन एक औषधीय वाली हो । जैविक खेती प्रणालीमा खेतीको बीचबीचमा लसुन लगाउनाले किराहरु भाग्छन भनिन्छ । लसुनका १–३ केस्रा खाली पेटमा पानी सँग खाँदा जोर्नीहरु दुख्ने रोगमा फाइदा पुग्दछ । यसले रगतमा बढेको कालेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइडलाई पनि समान्य गराउँदछ । ५० ग्राम जति तोरीको तेलमा ४–५ लसुनको केस्रा फुराएर डढाएर एउटा भाँडोमा राखी आवश्यकता अनुसार ढाड, कम्मर, वा अन्य दुखेको भागमा प्रयोग गर्दा विशेष लाभ हुन्छ ।